Isbedellada Sameeye Walba oo Sameeya Barnaamijku wuxuu U Baahan Yahay Inuu Ogaado Sanadka 2020 | Martech Zone
Meel kasta oo aad eegto, waxaa iska cad in tikniyoolajiyadda moobiilku ay ku dhex milmeen bulshada. Sida laga soo xigtay Cilmi-baarista Suuqa Isbahaysiga, Baaxadda suuqa app-ka adduunka ayaa gaaray $ 106.27 bilyan sanadka 2018 waxaana la saadaalinayaa inuu gaaro $ 407.31 bilyan sanadka 2026. The qiimaha barnaamijku u keeno ganacsiyada lama yaraysan karo. Maaddaama suuqa mobaylku uu sii kordhayo, muhiimadda ay shirkaduhu macaamiishooda ula macaamilaan barnaamijka moobiilka ayaa si aad ah kor ugu sii kacaya.
Kala wareejinta taraafikada ee ka socota warbaahinta caadiga ah ee webka una gudubto codsiyada moobiilka, goobta barnaamijka waxay soo martay heerar deg deg ah oo isbeddel ah. Noocyada barnaamijyada illaa isbeddellada naqshadeynta moobilka, waxaa jira arrimo badan oo la tixgelinayo markii aad go'aansato inaad horumariso barnaamij ganacsigaaga ah. Kaliya dhisida barnaamij iyo ku tuurista dukaanka barnaamijka uma shaqeynayo si wanaagsan macaamiisha loo beddelayo. Hawlgal dhab ah iyo beddelaad waxay u baahan yihiin khibrad isticmaale oo saameyn leh.
Baahida marwalba isbadalaysa ee macaamiisha ayaa badalaysa shuruudaha suuqa, iyo u adeegsiga fikirka naqshadeynta barnaamijkaaga horumarinta waa muhiim Iyadoo maskaxda lagu hayo, waxaa jira qaar ka mid ah isbeddelada naqshadeynta moobiilka laga bilaabo 2019 ee ay tahay inaad maskaxda ku hayso inta lagu jiro geeddi-socodka horumarinta ee ay u badan tahay inay qeexaan 2020.
Isbedellada 1aad: Naqshadaynta Calaamadaha cusub ee Maskaxda ku jira
Tilmaamyada aasaasiga ah ee looga faa'iideysan jiray barnaamijyada moobiilka illaa xilligan waxay ahaayeen xoqitaanno iyo qasabno. Isbedelada UI ee Mobaylka ee 2019 ayaa lagu daray waxa loo yaqaan Tilmaamaha Tamagotchi. In kasta oo magacu u sababi karo dib-u-eegis xayawaanka guryaha lagu kariyo, Tamagotchi Gestures ee codsiyada moobiilka ayaa loogu darayaa darajo sare oo shucuur iyo bini-aadam ah. Ujeeddada laga leeyahay in lagu hirgeliyo astaamahan qaabeyntaada ayaa ah in la qaato qaybaha barnaamijyadaada kuwa aan waxtarka lahayn marka loo eego adeegsigiisa isla markaana lagu xoojiyo soo jiidasho ay adeegsadayaashu la falgalaan si loo horumariyo khibradooda guud.
Wixii ka dambeeya Tilmaamaha Tamagotchi, isbeddelada naqshadaha moobiilka waxay yeelan doonaan dadka isticmaala oo ku lug leh walxaha shaashadda iyagoo adeegsanaya astaamo isdabajoog ah oo gujinaya. Laga soo bilaabo horumarinta qoraalka xoqitaanka illaa dhaqdhaqaaqyada isweydaarsiga ee loo adeegsanayo astaamaha aasaasiga ah ee codsiyada shukaansiga, kabashada waxay noqotay hab aad u badan oo dabiici ah oo lagula falgalo shaashadda taabashada marka loo eego gujinta.
Isbedellada 2aad: Maskaxda ku hay cabbirka shaashadda iyo Teknolojiyada la qaadan karo markii la sameynayo barnaamijyada moobiilka
Waxaa jira noocyo badan oo badan markay tahay cabbirka shaashadda. Markii uu soo ifbaxay smartwatches, qaababka shaashadda ayaa bilaabay inay sidoo kale kala duwanaadaan. Markaad qorsheyneyso codsi, waa muhiim in la abuuro qaab-dhismeed jawaab celin ah oo u shaqeyn kara sidii loogu talagalay shaashad kasta. Faa'iidada dheeraadka ah ee la jaanqaadka smartwatches, waxaad hubtaa inaad u fududaynayso macaamiishaadu inay si fudud oo sahlan oo noloshooda ugu milmaan barnaamijkaaga. Waafaqid Smartwatch ayaa had iyo jeer sii kordheysa mid aad u xasaasi ah, iyada oo ay taasi ahayd isbedel weyn oo UI ah oo wareegaya sannadka 2019. Si taas loo caddeeyo, 2018, waxaa jiray 15.3 milyan oo smartwatches ah oo lagu iibiyey Mareykanka oo keliya.
Tikniyoolajiyadda Wearable waa warshad sii wadi doonta inay kobciso oo qeexdo isbeddellada naqshadaha moobiilka sannadkan. Mustaqbalka, codsiyada waa inay ku daraan waxqabadyada dhabta ah ee la kordhiyay ee muraayadaha smart sidoo kale. Horumarinta istiraatiijiyadda AR hadda iyo ku hirgelinta astaamahaas barnaamijka moobiilka ayaa door muhiim ah ka ciyaari kara helitaanka daacadnimada kuwa horay u korsaday.
Isbeddellada 3: Isbeddellada Naqshadeynta Qalabka ee Moobilka ayaa Xoojinaya Qorshaha Midabka
Midabadu waxay muujinayaan astaantaada waxayna si aad ah ugu xiran yihiin aqoonsigaaga astaanta. Waa aqoonsiga noocaas ah ee ganacsiga ka caawiya inay ku xirmaan macaamiishooda mustaqbalka.
In kasta oo nidaamka midabku uusan umuuqan karin inay tahay walaac aasaasi ah ama isbeddel naqshadeyn muuqaal ah, isbeddelada qarsoon ee midabada ayaa badanaa sababi kara falcelin bilow ama mid taban oo bilow ah ee barnaamijkaaga - aragtida ugu horreysa ayaa ka dhigaysa farqiga oo dhan.
Mid ka mid ah isbeddellada naqshadeynta moobiilka gaarka ah ee loo adeegsado si isdaba joog ah ayaa ah adeegsiga midabbada midabbada. Markii jadwalka lagu daro walxaha isdhexgalka ama asalka, waxay ku daraan firfircooni ka dhigaysa barnaamijkaaga mid il qabad badan oo muuqda. Midabada ka sokoow, ka gudubka astaamaha ma guurtada ah iyo keenista animations-ka la xoojiyay ayaa ka dhigi kara dalabkaaga mid aad u xiiso badan.
Isbedellada 4aad: Qawaaniinta Naqshadeynta UI ee Mobilada ee aan waligeed ka bixin Qaabka: Ka dhigista mid Fudud
Ma jiraan wax macmiil u keenaya inuu tirtiro dalabkaaga si ka dhakhso badan xayeysiisyada soo dhex gala ama isdhexgalka isticmaalaha ee aadka u adag. Kala-mudnaanta mudnaanta iyo shaqeynta tirada astaamaha waxay caddeyn doontaa inay abuureyso khibrad macmiil oo ka wanaagsan. Waa mid ka mid ah sababaha ay isbeddelada naqshadeynta abku u xoogga saaraan fudeyd sannadba sannadka ka dambeeya.
Si tan loo dhammeeyo, waa muhiim in laga faa'iideysto cabbirka shaashadda ee kala duwan, sidaan hore u soo sheegnay. Naqshadaha yar-yar ayaa u oggolaanaya shakhsiyaadka inay diiradda saaraan hal cunug markiiba isla markaana ka fogaadaan culeyska dareenka oo badanaa keena dadka leh khibrado xun. Mid ka mid ah fududahay in la hirgeliyo muuqaalka loogu talagalay naqshadeynta UI-ga moobiilku waa is-dhexgalka waayo-aragnimada goobta la habeeyay. Kuwani waxay adeegsadaan adeegyada goobta ee adeegsadayaasha moobiilku ay si xamaasad leh u qaateen markii uu sii socdo.
Jaanqaadka 5aad: Ka faa'iideysiga Marxaladda Orodka ee Hormarinta
Geedi socodka horumarku wuxuu leeyahay marxalado badan, laga bilaabo orod gacmeedyada la adeegsanayo qalabka mockup app si loo dhiso noocooda, tijaabinta, iyo bilaabida arjiga. Orodka hore wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah aqoonsiga aagagga muhiimka ah ee isticmaalayaashaadu waqtiga ugu badan ku qaataan isla markaana hubiyaan in aagaggaasi ay ka sheekaynayaan sheekada magacaaga inta aad u soo gudbinayso khibrad u gaar ah barnaamijka isticmaalayaasha. Maaha wax lala yaabo, markaa, in nidaamkani ku yaal liistadeena qaababka naqshadeynta moobiilka ee la daawado.
Doorashada ku lug lahaanshaha bilowga 5-maalin naqshad sameynta kaa caawin kara aqoonsiga iyo xoojinta yoolalka barnaamijka. Intaa waxaa sii dheer, ka faa'iideysiga sheeko-qorista iyo dhisidda astaamaha bilowga ah si loo tijaabiyo loona soo ururiyo jawaab celinta waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa badeecada ugu dambeysa. Nidaamkani wuxuu hubinayaa inaad gasho marxaladda horumarka iyadoo si cad loo qeexay, yoolal istiraatiiji ah oo la xushay. Waxaa intaa sii dheer, waxay ku siinaysaa kalsooni ah in mashruucaaga horumarinta barnaamijka uu ka dhalan doono in fikradda loo beddelo mid dhab ah.
Hubso in Naqshadeynta App-kaaga Mobilka uu yahay kan ugu Fiican ee uu Noqon karo
Sameynta dalabka mobilada waxay noqoneysaa shuruud ku xirnaanta macaamiisha iyo helitaanka. Waxa xitaa ka sii daran waa hubinta in barnaamijka la soo saaray uu yahay mid tayo sare leh oo bixiya khibrad macmiil oo qumman. Dhab ahaan, 57% internetka isticmaaleyaashu waxay sheegeen in aysan kugula talin doonin ganacsi leh qaab-dhismeedka khadka tooska ah ee qaabeynta loogu talagalay. In kabadan nus ee shirkadaha 'taraafikada internetka hadda waxay ka imanayaan aaladaha moobaylka. Iyadoo maskaxda lagu hayo, UX waa qaybta ugu muhiimsan ee sii deynta barnaamijka ganacsiga. Taasi waa sababta ay u ilaalinayaan waxyaabaha sida isbeddelada naqshadaha moobiilka maskaxdu inay muhiim tahay.
Kacaankii guur-guura ayaa xilligii ubax noqday. Si aad ugu kobocdo suuqa casriga ah, qaadashada tikniyoolajiyadda horumarsan, raacitaanka mawjadda horumarka, iyo inaad ka warqabto isbeddelada naqshadaha casriga ah waxay kuu xaqiijineysaa inaad ahaato mid ku habboon oo awood u leh inaad wax ka qabato dalabyada macaamiishaada.
Tags: midabka barnaamijka mobiladaisbeddellada horumarka barnaamijyada moobiilkaqiimaha abka mobiladacodsiga mobileinterface isticmaalaha moobiilkaqarantilmaamaha tamagotchiisbeddelladatechnology wearable